५ वर्षमा राजपुरगाउपालिकामा परिवर्तन ल्याउछौ । - Raptinews - Raptinews ५ वर्षमा राजपुरगाउपालिकामा परिवर्तन ल्याउछौ । - Raptinews
राजपुरगाउपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसी संग राप्ति न्युजका सहकर्मीले गाउपालिकाको विकास लगायतका वारेमा गर्नु भएको कुरा कानि
राजपुरगाउपालिका अध्यक्ष लोकराज केसी
स्वागत छ अध्यक्ष ज्यु
# गाउपालिका वाट सेवाग्राहिहरुले सेवा कस्तो पाए छन् ?
स्थानिय तह संचालन ऐन २०७४ अनुसार सेवा प्रदान गरी रहेका छौ गाउपालिका कार्यालय वाट दिइने सेवाहरु नियमित प्रदान गरेका छौ । हामी संग भएका जनशक्तिले सके सम्म सेवा प्रभावकारी वनाएका छन् । तर पनि जति दिनु पर्ने हो त्यो हामीले दिन नसके कै हो । हामी संग भौतिक पुर्वधारको समस्या छ, गाउपालिकाका लागी आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामी संग छैन् । सरकारले पठाएको पनि छैन् । तर पनि हामी संग भएका कर्मचारीहरु तथा करारमा नियुक्त गरी प्रत्येक वडामा खटाएका छौ र वडा कार्यालय स्थापना संगै सेवा विस्तार गरेका छौ
# वडा कार्यालय वाटै पाउनु पर्ने सेवा दिनु भएको छ सेवाग्राहीहरु लाई ?
हामी वडा कार्यालय वाट दिनु पर्ने सेवा सके सम्म दिएका छौ तर केहि प्राविधिक समस्याहरु रहेका छन् जो गर्न कठिन छ । पञ्चिकरणका लागी नासु स्तरको निजामति कर्मचारीले गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यो काम करारमा नियुक्त गरीएका वडा सचिवहरुले गर्ने मिल्दैन । यस उनिहरु काम गर्छन् तर प्रमाणीत गर्न काम भने जिम्मेवारी प्राप्त वडा सचिव वाटनै गराउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ । यस वाहेक सवै सेवा वडाकार्यालय वाट दिई रहेका छौ । वडाकार्यालयमा पनि अवश्यक पर्ने कर्मचारी छैन् भने जस्तो छिटो सरल तरीकाले सेवा दिन नसकिएको होला तर पनि यसमा लागी रहेका छौ अव केहि महिनामा गाउपालिका लगायत वडाकार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागी योजना साथ हामी अगाडि वढीरहेका छौ । सेवा प्रभावकारी वनाउन सवै जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार ढंगले काम गरीरहेका छौ ।
# गाउपालिको विकासका लागी कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु समेटनु हुन्छ ?
हामीले राजपुरगाउपालिकाको विकासका लागी आवश्यक भौतिक पुर्वधार निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ, दोस्रो प्राथमिकताम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध पिउने पानी, गुणस्तर शिक्षा ,प्रत्येक गाउ वस्ती सडक संजाल संग जोडने, खेत सम्म सिचाई र सुकुमवासी समस्या , बाढी पिडितहरु लागी वसोवास संगै अन्य राहतका कार्यक्रमहरुलाई समेटेका छौ । यता लक्षीत वर्गको कार्यक्रम अन्र्तगत युवा क्षमता विकास संगै सिपमुलम कार्यक्रम, दलित अधिकार तथा क्षमता विकास कार्यक्रम,महिला शसक्तिकरण, वाल श्रम, वालशोसन र हिंसा विरुद्रका कार्यक्रम, जनजाति शसक्तिकरण,कार्यक्रम , एकल महिला , वृद्ध वृद्धा सम्मान तथा सहयोग कार्यक्रमहरु पर्यटन प्रवद्धन,संरक्षणका , नाका संचालन तथा विकास लगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरु समावेस गरी योजनामा ल्याएका छौ । समग्रमा राजपुरगाउपालिकाको विकासमा टेवा पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरीरहेका छौ ।
# गाउपालिकाकार्यालयका योजना तथा कार्यक्रमहरु कति सम्पन्न भयो ?
राजपुर गाउपालिकाको पहिलो गाउ सभा वाट पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका हिसावले भौतिक निर्माणका तर्फ योजनाहरु करिव ५० प्रतिसत भन्दा वढी भइसकेको छ । केहीको वाकि छ । लक्षीत वर्ग अन्तर्गत ५० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् अरु काम भइरहेको अवस्था हो ।
३ भुक्तानिमा ढिलाई भएको छ भन्ने जनगुनासो आएको नि ?
योजना सम्पन्न भइसके पछि सम्पुर्ण कागजपत्र मिलाई आएका सवै योजनाको रमक तत्काल भुक्क्तानि भएका छन् । केहि कागजपत्र अपुरो हुन्छ कर्मचारीको समस्या, प्राविधिक मिस्टेक जस्ता विभिन्न पक्षले गर्दा यस्तो देखिएको हो रमक भुक्तानिमा केहि ढिलाई भए पनि सवै प्रकृया पुरा गरेका योजनाहरुको भुक्क्तानिमा कुनै समस्या छैन् ।
# कसरी संचालन गर्नु भएको छ योजना तथा कार्यक्रमहरु ?
उपभोक्ता समिति वाट गर्न मिल्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति वाट सम्पन्न भएका छन् । भने जो टेण्डर वाट नै गर्नु पर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु टेण्डर वाट गराएका छौ । कानुनी परिधि भित्र रही जसरी सरल तरीकाले योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यसरीनै काम गरीरहेका छौ ।
३ जनताले संघिय संरचना अनुसार सेवा पाएका छन् त ?
पाएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई, पहिले सानो कामका लागी जिल्ला जानु पर्ने वाध्यता थियो अहिले घोराही जान पर्दैन् , प्रशासनका केही काम गाउपालिकामै हुन्छ । जिल्लाका कार्यालयहरु गाउपालिकामा आएका छन् । यसकारण पनि संघिय संरचना अनुसार केही हद सम्म पुराभएको मैले महशुस गरेको छु । यसो भन्दै गर्दा सवै पुरा भएको भने हैन अझ काम गर्न वाकि छ जस्ले जनताले प्रत्यक्ष रुपमा यसको आभाष गर्न सक्नु पर्छ । यसका लागी हामि कानुन तथा एने वनाउने काममा लागेका छौ । स्थानिय तहमानै जनताले सेवा पाउन सहज वनाउन हामी लागि परेका छौ ।
# तपाईहरु ले चुनावि समयमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नु भएन भन्ने गुनासो आएको छ नि ?
त्यसो हैन , हामीले चुनावि समयमा प्रतिवद्धता गरेका अनुसार काम गरिएका छौ । हामीले चुनावमा विकासका कुरा उठाएका शिक्षा ,स्वास्थ्य,पानि ,रोजगार लगायतका विषयमा काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थियौ । आज हामी त्यहि कामका लागी गुरु योजना वनाउने काम थालिएको छौ । समग्र राजपुर गाउपालिकाको विकासका लागी योजना वनाउने कामको शुरुवात गरिसकेका छौ । यस विषयमा वडाअध्यक्षहरु जिम्मेवारपुर्ण रुपम लागि रहनु भएको छ ।
५ वर्ष पछि राजपुरगाउपालिका कस्तो भएको देख्न सकिन्छ ?
पाच वर्षमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जनताका आधारभुत सेवा पुरा भएको हुने छ । पहिले पनि भने मैले जुन गाउपालिकाका समस्याहरु छन् यि केहि हदसम्म पुरा भएको हुने छ । सभ्य, असल समाजको निर्माण भएको हुने छ । कोही पनि शिक्षा वाट वञ्चित भएको अवस्था हुने छैन् । वडा वासिले वडा कार्यालय वाटै सबै काम गराउन सक्ने छन् । यो अवस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका छौ । यो एक्लै जनप्रतिनिधिहरुले मात्र सम्भव हुदैन् यसका लागी सवै वडा वासीहरुको साथ र सहयोगको अति महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । मलाई विश्वास छ यसमा हामी सफलहुने छौ ।
# अन्त्यमा केही भन्न चहान्नु हुन्छ ?
गाउपालिकाको विकासमा जुटेका छौ , कतै छुटन पनि सक्छ हामी लाई आफ्नै दाजु भाई भनेर प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर भन्न जनताहरु लाई अनुरोध गर्दछु । अवको ५ वर्षमा हामी सबै मिलेर देशकै नमुनाको रुपमा राजपुरगाउपालिकालाई चिनाउन लाग्नु पर्छ यो सबै गाउपालिका वासीको दायित्व पनि हो ।
# समयका लागी धन्यावाद
तपाई र राप्ति न्युज अनलाईन लाई पनि धन्यवाद जस्ले कुरा राख्ने मौका दिनु भयो ।
लैङ्गिक समानता कार्यक्रममा जोड दिने – लमही नगरपालिका प्रमुख केसी
सरकारमा जान खुला छौंः संघीय फोरमका अध्यक्ष यादव
बाँके जिल्लामा २३ जना कोरोना सङ्क्रमित निको भई घर फर्किए
प्रधानमन्त्री ओली एकदलीय सार्वसत्तावादी सोचबाट अघि बढेको – नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा